Robot palletizer nwere ọgụgụ isi
Enwere ike iji palletizer robot n'ọtụtụ ahịrị mmepụta, na-enye ọgụgụ isi, mechanization maka saịtị mmepụta. Ọ bụ palletising lọjistik usoro nke nwere ike ji mee ihe na ụlọ ọrụ nke biya, mmiri, rọrọ ihe ọṅụṅụ, mmiri ara ehi, ihe ọṅụṅụ na foodstoff wdg Ọ na-ọtụtụ-eji maka katọn, plastic crate, kalama, akpa, gbọmgbọm, ịda mbà ọbọp ngwaahịa na ike wdg .
MG atọ Cylinder Rotary Sand Dryer
Kedu ihe bụ igwe nkụ rotary nke nwere cylinder atọ?
Igwe nkụ nke atọ cylinder bụ mmalite nke teknụzụ Europe, nke mejupụtara atọ dị iche iche diameters concentric cylinders, ọ na-akpọkọta ibe ya ọnụ. Na cylinder dị iche iche Angle na anya stripper efere na ntuziaka efere, a Ọdịdị hụ na ihicha ihe site ike ndọda tinyere gburugburu ije direction, na ọ na-ezuru njigide oge na zuru ezu dispersion na cylinder draya., Nke ahụ bụ ihicha ihe na. cylinder si n'ime ọkụ n'ime na okpomọkụ eruba zuru oke okpomọkụ mgbanwe.
2021 China New Technology Full akpaaka akọrọ ngwa agha Line Production
A na-akpọkwa ngwa ngwa akọrọ akọrọ, bụ́ nke a na-eme n'ụlọ ọrụ mmepụta ihe site n'ịchịkọta ihe nke ọma na ịgwakọta otu. Enwere ike iji ya mee ihe ozugbo site n'ịgbakwụnye mmiri na ebe owuwu ihe. Ọ nwere ihe dị iche iche n'agbanyeghị na ọ na-agbakwunye mgbakwunye dị iche iche. Ọchịchọ maka ngwa agha akọrọ amụbaala ngwa ngwa n'ihi uru ya pụtara ìhè ma e jiri ya tụnyere mmepụta ngwa agha n'ebe ọrụ.
Ụdị ngwa agha akọrọ MG ọhụrụ na-eji teknụzụ Europe kachasị ọhụrụ. Ọ na-akwado silos nchekwa ihe akụrụngwa, ndị na-ebugharị screw, hopper na-atụ ụgbọ ala, silos mgbakwunye, sistemu mgbakwunye dosing, premix hopper, igwe ihe mkpuchi okpukpu abụọ, ihe ngwucha ngwaahịa, igwe na-ebugharị akpaaka, ndị na-anakọta uzuzu, igwe ikuku, igwe njikwa PLC. The Robot palletlizer, Jumbo akpa akpa igwe, nnukwu ụgbọala loading usoro anyị nwere ike kwadebere ndị ahịa dị ka chọrọ.
MG Dry Mortar Plant nwere Sistemụ Nkwakọba akpa na Jumbo na Shandong, China
MG Dry Mortar Plant nwere Sistemụ mbukota akpa na Jumbo A na-emeziwanye ya na ngwa ngwa akọrọ na akpaka zuru oke. Dabere na ụdị dị iche iche ejima aro agravic igwekota ma ọ bụ Ngwakọta ihe ọkụkụ, nke Ngwakọta ikike nwere ike iru 10-40t / h, MG engineer chepụta ọzọ nyefe hopper na ụzọ abụọ ma ọ bụ atọ njikọ njikọ n'okpuru mixer, nke mere na ihe nwere ike ibufe n'ime ụzọ abụọ ma ọ bụ atọ na obere akpa, jumbo akpa usoro na bulking usoro.
MG 10-12T/H Awụnyere ihe ọkụkụ na-agwakọta ngwa ngwa akọrọ na Kosovo.
Emebere MG 10-12T / H Full Automatic Dry Mortar Mixing Plant dị ka echiche kachasị ọhụrụ na Europe si dị, mmepụta a na-anabata sistemu njikwa akpaaka nke kọmputa PLC, nke ikike mmepụta nwere ike iru 10-70 tọn kwa elekere dabere na nhazi usoro. .
Dị ka ọ na-adịkarị, ihe ọkụkụ na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ na-akpaghị aka kwesịrị ịgụnye sistemu nchekwa akụrụngwa, nnyefe na sistemu ibu akpaaka, sistemu agwakọta, sistemu mbukota, sistemu ikuku ikuku, ịnakọta uzuzu, sistemụ njikwa PLC, wdg.
Ngwaahịa ọhụrụ 2021 3-4T/H Igwe ngwa agha akọrọ dị mfe
Igwe ngwa agha akọrọ akọrọ emebere ya dabere na igwekota ọdịnala, agbakwunyere sistemu ihe na-ebufe ihe, ihe nchekwa nchekwa na igwe na-ejuputa akpaka. Ihe ndị a gwakọtara nke ọma ga-abanye n'ime ebe nchekwa ahụ site na ọkpọkọ na-ebufe ihe, na igwekota nwere ike na-eri nri na-aga n'ihu ma na-arụ ọrụ na-aga n'ihu na mmepụta ahịrị eruba, ma ngwá ọrụ adịghị elu karịa mita 4, si otú a na-edozi nsogbu nke ịbawanye ogbako ahụ. Ọzọkwa, ọ nwere ike na-achọpụta nha na ndochi akpaaka, yabụ, ọ nwere ike ọ bụghị naanị ịchekwa oge na ume mana ọ nwekwara ike bụrụ nke ziri ezi. Na-achọ obere ego, mana ọ nwere ike ibu, ibu na ngwugwu ihe na-akpaghị aka; ọ bụghị ihe ijuanya, ọ bụ usoro mmepụta dị mfe ma bara uru.
Zhengzhou MG Brand 15-20T/H zuru akpaka akpọnwụ akpọnwụ na-agwakọta osisi tile nrapado Imepụta
MG usoro akọrọ ngwa agha osisi dabeere na ọhụrụ imewe echiche na Europe, a mmepụta adopts elu kọmputa akpaaka-akara usoro, onye mmepụta ike iru 30-100 puku tọn kwa afọ dabere na usoro nhazi. The mmepụta akara mejupụtara usoro nchekwa, metering na batching usoro, mbufe usoro, agwakọta usoro, ikuku compressor usoro, nkwakọ usoro, na dedusting usoro, wdg.
20-30T/H Osisi Ngwakọta Ngwakọta Akọrọ maka Imepụta Ọrịre
Mkpali uzuzu uzuzu
MG DMC Pulse Akpa Dust COllector na-eji ikuku abịakọrọ dị ka ihe na-ehicha ihe, a na-ahapụ ikuku abịakọrọ ozugbo site na usoro ịgba ọgwụ pulsed, na ikuku dị elu na-eme ka ikuku dị gburugburu banye n'ime akpa nzacha na oke ọsọ, nke na-eme ka akpa nzacha gbasaa ngwa ngwa. A na-ekpochapụ uzuzu dị n'elu akpa nzacha site na ujo na ntụgharị ikuku. Uzuzu dị n'okpuru nhicha na-adaba n'ime ebe a na-anakọta ihe, nke a na-esi na ahụ pụta site na valvụ ala uyi. Nke a imewe bụ kọmpat na Ọdịdị, adaba na mmezi,nke nwere njirimara nke nnukwu ash na-ewepu ike kinetic na nnukwu mkpochapụ ash. A na-eji ya eme ihe n'ọtụtụ ebe na-adị ọcha nke uzuzu nwere gas na ihe owuwu ụlọ, Ngwuputa, ụlọ ọrụ kemịkalụ, coal, nhazi ntụ ntụ na ụlọ ọrụ ndị ọzọ.
Ezigbo mma nwere ahụmịhe ọkachamara nke afọ 20
Nchedo gburugburu ebe obibi akụ na ụba ọkachamara ntụkwasị obi
Teknụzụ kacha ọhụrụ nke China zuru osisi ngwa agha mgbidi putty
MG usoro tile nrapado ngwa agha osisi dabeere na ọhụrụ imewe echiche na Europe, a mmepụta adopts elu kọmputa akpaaka njikwa usoro, onye mmepụta ike iru 30-100 puku tọn kwa afọ dabere na usoro nhazi. The mmepụta ahịrị mejupụtara nchekwa usoro, metering na batching usoro, mbufe usoro, agwakọta usoro, ikuku compressor usoro, nkwakọ usoro, na dedusting usoro, wdg
Onye na-anakọta uzuzu akpa MG Impulse Maka ụlọ ọrụ na-agwakọta ngwa ngwa akọrọ
Onye na-anakọta uzuzu MG Impulse na-anabata usoro nhicha pulse nke otu pulse, nke nwere uru nke nsonaazụ nhicha dị mma, ịdị ọcha dị elu yana ikike njikwa dị elu, ogologo ndụ ọrụ nke Filter-Bag, obere mmezi iji hụ na nchekwa ya na ntụkwasị obi na-arụ ọrụ.
A na-eji usoro a eme ihe n'ọtụtụ ebe na metallurgy, ihe ụlọ, igwe, ụlọ ọrụ kemịkalụ, Ngwuputa na ụlọ ọrụ mmepụta ihe ndị ọzọ nke anaghị ewepụ uzuzu uzuzu fiber na mgbake ihe.
Ihe nchekwa ihe nchekwa silo ciment nchekwa silo 60T 100T-bolted ụdị maka mbupụ
Ọnụ ahịa ụlọ ọrụ 60 ruo 300 Ton Bolted Detachable Cement Silo Bins maka ciment flyash, ngwa ngwa ngwa ngwa, mkpokọta ect. bụ ebe nchekwa tank agbachibidoro nke nnukwu ihe, dabara adaba maka ịchekwa ọka, ciment, uyi ofufe na ihe ndị ọzọ buru ibu. Enwere usoro dị larịị na tank ahụ, ọ nwere ike igosipụta ọnọdụ nke ihe na ole, ngwa braking ngwaọrụ nwere ike wepụ ihe nkwụnye ihe nke sitere na ike ruo ogologo oge. Silo silo (silo nchekwa) na mgbapụta ịghasa na-ebufe ihe na ebe ọ bụla, ntinye dị mfe nke tank, nchekwa na ntụkwasị obi bụ ihe dị mma nke ụdị tankị ọkpọ ọ bụla.
Nrụpụta dị elu Dry Mortar Mixing Line Production
MGDM-3.2 akọrọ ngwa agha agwakọta mmepụta akara na-akpọ ume na-azọpụta akọrọ ngwa agha Ịgwakọta ahịrị, akọrọ ngwa agha agwakọta igwe, akọrọ ngwa agha agwakọta akụrụngwa. Ọ bụ otu ụdị Semi-akpaaka akọrọ ngwa agha, akụrụngwa ga-nri n'ime ịwụ mbuli site ntuziaka, na ịgwakọta, nkwakọ na-akpaghị aka. Ụlọ ihe ọkụkụ a na-akpọ nkụ nke ọkara-akpaaka nwere ike ịkwado otu igwe ma ọ bụ abụọ dị ka ikike ndị ahịa chọrọ. Ikike nwere ike ịbụ 6-8T / H. Ọ bụ nhọrọ kacha mma maka ịtọlite ​​​​ụlọ ọrụ ngwa ngwa akọrọ na ọnụahịa ezi uche dị na ya na nchọgharị ngwa ngwa.
2021 elu arụmọrụ vetikal ụdị kwụsiri ike arụmọrụ Raymond igwe igwe igwe
Igwe ihe igwe Raymond bụ igwe ntụ ntụ kachasị ọhụrụ emebere site na nyocha miri emi nke ndị ọkachamara dabere na nyocha igwe ntụ ntụ ogologo oge na ahụmịhe mmepe. Mmepe ya na-amịkọrọ nkà na ụzụ na-egweri uzuzu Europe ọhụrụ na echiche, ma jikọta aro nke ndị ahịa 9158 nke igwe ntụ ntụ. Igwe igwe igwe a na-egbo mkpa mmepụta nke ndị ahịa na 200-33μm (80-425Mesh) ntụ ntụ dị mma.